Druskininkai Aqua Park, elisedolobheni efanayo Lithuanian kungokwalabo ngobukhulu epaki amanzi e-Europe. Le ndawo yokudlela imfashini yitshe eliyigugu of indawo spa ka Druskininkai. Kukhona okubhukuda ahlukahlukene, Jacuzzi, yokubhukuda nge amagagasi ulwandle, umfula zeziyaluyalu, amabhishi, izimpophoma, massage nezimpophoma izinto eziningi ezikhangayo. Ubude Imininingwane wezintaba wendawo kwamamitha 600. Ensimini ka le nhlangano iyisonto ehhotela, nightclub kanye bowling. amanzi Area epaki ihlanganisa anesithoba amawaka square metres, ngakho kukhona lapho, njengoba besho, ukuzulazula. Ukuze lapha ezazifunwa izivakashi eziningi, futhi kuphela izakhamuzi Lithuania njengoba komsebenzi wokuthola zabo ukuchitha okungenani oyedwa ngempelasonto ngenyanga kuleli paki.
incazelo Jikelele: Ipaki lamanzi
Lesi sakhiwo esikhulu esakhiwe nazo zonke izidingo lezihambi - kuyinto epaki amanzi e Druskininkai. Incazelo isikhungo ufanelwe ukuqashelwa okukhethekile. Ngakho-ke, tshela kafushane kwakho ngakho. Ingaphakathi isikhala epaki yakhelwe ukuze izivakashi babezizwa ngokuphelele esikhululekile futhi bazizwa emkhathini we ehlobo wachitha ezindaweni ezishisayo. Isakhiwo isikhungo nje giant yokubhukuda, evamile ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana.
Ngamunye gumbi kwesigubhu kuyahluka izici siqu: endaweni eyodwa kungenzeka ukuzizwa imiphumela obishini, kwesinye ithuba Ungazama ngesandla sabo e-sibhukuda isivinini. Pool zasendlini hhayi ngokuphelele, ukuze bonke abafisa nethuba ukubhukuda idingidwe obala.
Isakhiwo amanzi has a pool yangasese kulabo abafuna ukuba bangene isiphepho real - ukuphakama amagagasi eyayenziwe wenza kungaba idlule imitha elilodwa. Ngo Druskininkai amanzi ipaki, kanye kunoma iyiphi enye indawo efanayo, ayihlomele amanzi amaslayidi, ukuthi unike amandla ekwehleni kakhulu futhi kancane.
Kukhona eyinkimbinkimbi sauna namabhati, okungaba khona bonke abantu abadala.
Waterpark - isakhiwo ezimboziwe, ngakho ukuza lapha unyaka wonke.
Druskininkai amanzi ipaki siqukethe izakhiwo ezintathu.
Uma kwenzeka A ezimbili phansi kunikezwe. Esitezi sokuqala kukhona amatafula amabhiliyade, yokudlela, ukuyodlala i-bowling, cinema, ibha futhi playroom zezingane. Esitezi i ehhotela internet cafe elise kanye ikamelo lengqungquthela yesibili.
Ukwakha B - a eziyinkimbinkimbi izindlu ezinhle zokugeza, futhi kukhona sesibili. Emfanekisweni wokuqala kubo ungathola i-swimming pool, zokugeza obishini namabhati 20 ezahlukene. Eyesibili phansi yakhelwe ngamakamelo aerobics, ukufaneleka, massage, ubuhle nokucwala solariums.
Esikhathini izindlu ibekwe ugibele amanzi amaslayidi, okuyinto thina uchaze ngezansi.
Izikhangibavakashi nokuzijabulisa epaki amanzi
Ake sihlole kafushane amaslayidi nezinye ezikhangayo Druskininkai amanzi ipaki, eqinisweni noma ubani ofuna ukuba uvakashele lesi eziyinkimbinkimbi emangalisayo, kudingeka azi ukuthi yini okufanele ayilindele phambili. Ngakho, ethandwa kakhulu-roller coaster amanzi epaki Druskininkai - kuyinto:
SRAUTAS - slide 80 budze. Kuyinto entabeni evulekile Wabasaqalayo. It yenzelwe ekwehleni ku emakamelweni inflatable. On SRAUTAS bavumela izingane eziye zaphetha eneminyaka eyisishiyagalombili. Uma Skate-slide amanzi, kubonakala sengathi aphinde abhukude abuyele ngaphansi kwalesi emfuleni zeziyaluyalu.
SŪKURYS - slide, ubude baso ifinyelela 40 amamitha. is zasendlini ezinkulu yokubhukuda elise ekupheleni kohambo. Lapha uvunyelwe kuphela intsha asebeqedile iminyaka engu-15 noma ngaphezulu.
AZARTAS - ubude slide amanzi ifinyelela 107 amamitha. Ukukhangwa has inqwaba ematfuba ezahlukene. Lapho ungakwazi ukugibela eyishumi izingane futhi izingane ezindala.
ADRENALINAS - kule ntaba imitha-80 yakhelwe for labo abasendleleni esilindele kakhulu. Ingxenye enkulu Luhambo itholakala ngaphandle, kodwa ngenxa izinga okusezingeni eliphezulu abadabuka esiyitholayo abandayo ngisho ebusika.
Futhi e Druskininkai Aqua Ipaki has a slide emnyama imiphumela ukukhanya ehlukile, waterslide abantu bayathanda weightlessness, nomunye ukugibela okuyinto kuvunyelwe kuphela kumadivayisi inflatable. Ubude aqueous roller eliphakeme 122 amamitha.
Okunye ezikhangayo futhi amapaki ezokuzijabulisa kukhona amachibi ngenhla, Jacuzzi obishini zokugeza, ama-sauna namabhati (ezomile, Japanese futhi kwesikhathi samanje) futhi umnyango yezingane. endaweni Wezingane yakhelwe izivakashi abasha abaneminyaka engaphansi kwengu-14. Izingane ezingaphansi kweminyaka emihlanu ziyadingeka ukuze uhlale e-pool ngaphansi egadiwe yabazali.
Bath aquapark eziyinkimbinkimbi
Druskininkai Aqua Ipaki bangaziqhayisa okugeza yayo eziyinkimbinkimbi, okuyinto Itholakala B. izindlu Lesi sakhiwo sinamagumbi izinhlobo ezihlukene ezingu-20 ezinhle zokugeza ngezimiso ukungalingani zezulu, imiphumela, kanye lokwelatshwa. Lapha kunikezwa umusi amakamelo kanye sauna ezomile, uhlelo wadala nge aromatherapy usebenzisa imishanelo, usawoti kanye noju.
Futhi, baba baningana izindlu ezinhle zokugeza, okuyinto enze manipulations esihle yezimonyo - buso ubuso nomzimba esekelwe ulwelwe, ushokoledi, uLwandle Lukasawoti noju. Phakathi izindawo kukhona uhlelo ngabanye futhi iqembu kwesihlahla se-okhi elintantayo noma Amahlumela birch.
On the ophahleni eyinkimbinkimbi obhavu kanye sauna ifakwe nudist beach kulabo bathanda nijabula, hhayi kuphela ngokwemvelo kodwa futhi ubuhle zomzimba womuntu.
Druskininkai Aqua Ipaki e Lithuania has izindawo ezimbili zokuzijabulisa zezingane. "Mars" Inxanxathela kuhlinzekelwe izivakashi kulencane. Ones Little avunyelwe ahlale kuphela ngaphansi kokuqondisa kwabazali. Lapha pyatnadtsatisantimetrovoy yakhelwe pool ukujula, amaslayidi encane, amanzi roller, "emithonjeni-bryzgalki" futhi yonke indawo zihlakazeke amathoyizi amaningi.
Eyesibili zone ibizwa ngokuthi "mkhathi Merry." Lapha izingane ungahlala isikhathi eside bebodwa, kodwa i extra amanzi icala epaki abasebenzi liyozibonela malyshney. Kukhona futhi amaningi ezikhangayo fun for izingane lwezigaba zobudala obuhlukene.
Ukudla ku Waterpark
Druskininkai Aqua Park (Lithuania), ukubuyekezwa zazo sizoxoxa kamuva, futhi ine inethiwekhi omuhle kakhulu ezinkantini. Eqinisweni, ngemva asebenzayo futhi ashukumisayo izivakashi iholide isikhungo ngempela ufuna adle noma yini. Ngakho-ke, bheka ifakwe bar, ikhefi futhi yokudlela.
Ingaphakathi yokudlela sika eliqoshiwe njengoba ezishisayo Chili Pica. I ivulekile ihholo isikhungo has a emkhathini ekhethekile ehlanganisa angavamile nenduduzo. Lapha ungakwazi hhayi kuphela uphumule inkampani kwezihlobo zethu abathandekayo kodwa futhi hlela iphathi inkampani noma yimuphi omunye ukugubha.
Uma yeningi futhi imvelo ukhombise impilo nje kubaluleke njengokugwema ukudla okuhle, ke Chili ikhefi-Pizzeria.
Cili kava - sha esihlanganisa Amabha amathathu nge imiqondo ehlukene. Ngaphansi umkhatsi omkhulu ifakwe izibani neon, kuyinto bar blue. Yacwengisisa VIP-bar nempahla ezahlukene Retro. Futhi khona kanye phakathi nendawo eyodwa amachibi kuyinto bar lwesithathu. It yakhelwe kulabo abasebenza emizweni engavamile.
Izindleko kwemisebenzi epaki amanzi
Amanzi epaki kumasevisi Druskininkai, amanani ahlukile. Ngakho, izindleko amathikithi e-eziyinkimbinkimbi amanzi luyehluka kuye ngosuku lweviki. Ngezimpelasonto noma amaholide, amanani ngokuvamile ephakeme kunaleyo ngezinsuku zeviki. Ofisa ukungena yokudlela Ungathenga pass njengoba usuku noma amahora ambalwa. Ungathenga amathikithi kuphela kwechibi ugibele noma achithe isikhathi in the okugeza.
Izindleko i ithikithi omdala ukuvakashela kumnandi phezu kwamanzi kwi amabanga phakathi nesonto kusukela euro 9 kuya ku-14. Konke kuncike isikhathi esichithwa kuleli paki. Kodwa ngosuku ukudlula izindleko siyenyuka sisuka € 11.5 kuya € 23.5. Ticket izintengo abafundi zimi kanje: a zaphakathi nesonto - 8-13 euro, off - 9-17,5 euro. Ukuze phakathi nesonto zasenkulisa kuyodingeka bakhokhe 4.5 € - 8 €, okukhiphayo, lesi samba silingana kuya euro ayisithupha nanye.
Druskininkai amanzi ipaki kuletha izivakashi izidingo ezimbalwa ngokuphelele ezingeyona inkimbinkimbi. Ngaphambi uvakashela yokudlela, kutuswa ukuba balungiselele imikhiqizo ukunakekelwa siqu, phakathi okufanele amathawula kanye Slippers. Kudingeka nokuba abe ukhululekile ukugeza suit. Abazali futhi ithembele ulandele izingane ezincane futhi ngeke ngibashiye zingagadiwe.
Uphenyo Druskininkai amanzi ipaki e Lithuania emangalisayo okuhle. Kuzivakashi nenhlanhla yokuthola ukuphumula lapha, ngithi-ke yindawo lapho ephumula umzimba kodwa futhi umphefumulo hhayi kuphela. Konke ungenza ukuzijabulisa ukhululekile futhi umbukwane. Futhi kule eziyinkimbinkimbi kanye fun for izingane, bengafuni ukulishiya. Futhi uma abadala guys baqonde ukuthi kumele ushiye okuthile imvuthuluka kulencane kuyinhlekelele yangempela. Abazali bayajabula ngokuthi kukhona indawo lapho izingane musa ngizithola. Izivakashi eziningi zazithatha ukuthi ngempela ukuza epaki amanzi e Druskininkai futhi.